DHUGASHO DHIGANAHA #GODOB IYO #GALLAD – War La Helaa Talo La Helaa
DHUGASHO DHIGANAHA #GODOB IYO #GALLAD
By Hussein abdulle	 On Nov 1, 2018
Waxaan akhriyay Buugga GODOB IYO GALLAD ee uu qoray Qoraa, Bare, Xuseen M. Cabdulle (Hussein Wadaad). Ugu horrayn waxaan u mahadcelinayaa qoraa Xuseen Wadaad oo dalka Iswiidhan iiga soo dhiibay Godob iyo Gallad iyo bugaag kale. Waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay macallin. Intaas kadib waxaan rabaa in aan inyar ka iraahdo waxa iiiga baxay oo kala baxay Godob iyo Gallad akhris kadib.
Buugga Godob iyo Gallad waxa uu ka kooban yahay 396 bog oo ee A4 ah guud ahaan. Waxaa laga yaabaa in aad isdhahdid “bisinkee sheekadu tiro badanaa?” Balse marka aad Godob iyo Gallad baalashiisa kala rogtid ee aad akhris ku bilowdid ayaad go’aansanaysaa in aad ogaatid halka ay ku dhamaato. Sidaas darteed balaashii tirada badnaa waxa aad uga laacaysaa muddo yar. Shakhsi ahaan anigu marka aan akhrinayo buug sheeko ah sida Godob iyo Gallad oo kale waxa aan xiisaha sheekada ku ogaadaa akhriska aan ku bilaababa waxaa igu adkaata in aan joojiyo sheekada ilaa aan ka salgaaro halka ay ku dhamaato sheekadu.
Sheekada dhaganaha Godob iyo Gallad na waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee aan akhriyo.
Godob iyo Gallad waxa uu warinayaa wiil reer miyi ah oo noloshii miyiga inta nacay magaalo u dalaabay si uu uga helo nolosha miyiga mid ka roon balse nasiibdarro markii uu baladkii galayba ciidankii qaranku la booday oo xabsi bartanka u dhigay asaga oo aan aqoon waxa xabbisay iyo sababta loo xabbisay toona. Xattaa macnaha xabsi wiilka miyiga ka soo haajitay ma garanayo.
Kaaga sii darane xabsigii loogu sii daray jirdil iyo gaboodfal ayadoo kuwa sidaas falaya ay ogyihiin in wiilkaasi uusan wax dambi lahayn haddii aan dambi looga dhigay maxaa adiga oo reer miyi ah magaalada u soo gashay? Ayaga qudhooda ayaaba miyiga ka yimide sidee taas dambiga uga dhigi karaan? Haddaas maxay ku maageen miskiinka? Godob iyo Gallad ayaad ka ogaanaysaa sababta.
Haddii Godon iyo Gallad yahay buug inta aan sheegay iyo in aan ilduufayba koobay sow markaas waajib nagu ma ah in aan u mahadnaqno Qoraaga kansho iyo kisba galiyay Godob iyo Gallad si uu dhigaal iyo dhaxal uga tago ummadda Soomaaliyeed? Alleylehe haa! Waa uu naga mudan yahay.
Sawirro:-Faah faahin qarax ka dhacay Magalada Muqdisho